Meydka Gabar yar oo Maalintii Labaad yaala Isbitaalka Boosaaso | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Meydka Gabar yar oo Maalintii Labaad yaala Isbitaalka Boosaaso
Meydka Gabar yar oo Maalintii Labaad yaala Isbitaalka Boosaaso
Wararka naga soo Gaaraya Cisbitaalka weyn ee Magaalada Boosaaso ayaa waxaa ay sheegayaan in maalintii labaad yaala Meydka gabar da’deeda lagu qiyaaso 14 sano Jir taasoo shalay laga soo qaaday xaafada Raf iyo Raaxo agagaarka halka loo yaqaano Balbala weyn.
Boqolaal dadweyne ah ayaa buuxdhaafiyay Cisbitaalka waxaana wali la la’yahay ehelada iyo waalidiinta dhalay gabadhan yar inkastoo waalidiin ay caruuro ka maqan yihiin ay joogaan cisbitaalka.
Laamaha kala duwan ee dowlada Puntland ayaan weli ka hadal falkaan lagu dilay Gabadhaan iyadoo ay u muuqato in aysan xil weyn iska saarin sidii loo heli lahaa ehelada gabadha u geeriyootay nooc kamid ah tacadi lagula kacay.
Arimaha xusidda mudan waxaa qeyb ka ah in dad shacab ah ay iska soo uruuriyeen lacagta Talaagada lagu rido meydka kadib markii saacado badan uu meydka gabadha saarnaa dhagaxa loogu talagalay in la saaro.
Maqaal horeMaxaa ka Jira in Al-Shabaab ay la wareegeen degaano ka tirsan gobolka Sanaag
Maqaal XigaFaahfaahinta Weerar ka dhacay Gobolka Baay & khasaaro ka dhashay